सुत्केरी आमा हस्पिटलमा पैसा तिर्न नसकेर अलपत्र, २२दिनको बच्चाको यस्तो बिजोग (भिडियो हेर्नुस्) – Daily NpNews
होसियार ! यस्ता संकेत देखिएमा हुनसक्छ आँखामा इन्फेक्सन, बनाउँनसक्छ दृष्टिबिहिन
मंसीर २२ गते नायिका स्वेता खड्काको बिहे !
यी महिलाले ठेक्का हत्याउन मन्त्रीसँग नै लसपस गरेको यसरी खुल्यो !
ओठको कालोपन हटाउन अप्नाउनुहोस् यी घरेलु उपाय, पाउनुहुनेछ सुन्दर गुलाबी ओठ
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/सुत्केरी आमा हस्पिटलमा पैसा तिर्न नसकेर अलपत्र, २२दिनको बच्चाको यस्तो बिजोग (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । बच्चा जन्मिएपछि आमाको न्यानो काखमा हुर्कन पाउनु बच्चाको अधिकार हो । तर एक जना महिला सुत्केरी भइन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भयो । बच्चा जन्मनु भन्दा अगाडी नै खुट्टा नचल्ने समस्या थियो ।
बच्चा जन्मिएपछि पनि उनी अहिले अस्पतालमै छन् । तर सानो बच्चा अहिले घरमा छ । घरमा बच्चा जन्माइन् । तर आमा र बच्चा दुवैजनाको खुट्टा समेत चलेन । तीन दिन सम्म पनि त्यो समस्या नहटेपछि दमक स्थित अस्पताल लिएर गएको छ । सो अस्पताले फिर्ता पठाइदिएपछि नोवेल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
कोठा भाडा तिर्ने पैसा नभएका कारण समस्यामा परेका उनीहरु अहिले सुत्केरी आमाको स्वास्थ्यका कारण पनि थप खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । गर्भवती अवस्थामा पोसिलो खानेकुरा खान नपाएका कारण उनलाई समस्या आएको अस्पतालका चिकित्सकले जनाएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण ति महिलाले पोसिलो खानेकुरा खान नपाएको छिमेकीको भनाई छ ।
बारामा गोली चल्यो, प्रहरीको गोली लागेर १ जना गम्भिर
सवारी पासमा नयाँ व्यवस्था लागू : यसरी लिन सकिन्छ
यो हो १९ करोड पर्ने दुनियाँको सबैभन्दा महङ्गो बाइक !